Olona iray izay mihaino sy orsa | Apg29
Olona iray izay mihaino sy orsa
Dia mieritreritra ny taloha modely ao amin'i Kristy izay teo nandritra ny taona maro tany am-boalohany ho toy ny Kristianina. Ary nomeny ahy ny toro-hevitra sy ny fampiononana, fa koa nibedy.
Ao amin'ny Skellefteå Hitako tanora maro tonga ny finoana sy niaina ara-bakiteny isika ao amin'ny Fiangonana. Ny fanahin'Andriamanitra, toa be dia be ary feno fankasitrahana aho fa rehefa tanora kristianina maintsy miaina izany. Velom-pankasitrahana ireo ray sy ny reny ara-panahy izay nihaino ka nitondra ahy.
Ny sasany aminareo dia mahafantatra no nipetraka tany amin'ny faritra avaratr'i Soeda nandritra ny 23 taona teo amin'ny fiainako. Winter no tsara tarehy mahagaga amin'ny oram-panala be izao fa tsy ampy ao amin'ny gnällbältet Andriamanitra izay nitondra ahy ny anao.
Ao Skellefteå izay nipetrahako 1991-1994 minitra aho bönetanten Anna-Maja, dia toa tsy dia be ka tsy ho be feo ao amin'ny fiangonana Pentekotista izay miasa aho. Nanana fifandraisana amin'ny lanitra ka nahafantatra izay ny herin 'ny vavaka dia afaka mahavita.
Matetika aho tao Anna-Maja sy ny, dia nahatsiaro ho Nanome toky. Nolazaiko ny tanora tia fahoriana ho an-dravehivavy, ary izy nanontany ahy.
Nangataka izahay Skelleftea sy ny tanora ny famonjena. Nianatra faharetana amin'ny vavaka, hamoa. Foana ka niara-nivavaka izahay rehefa tonga teo amin-Maja Anna.
Koa satria nipetraka manaraka aho isan-Sven izay mpitandrina teo aloha ny Failandy dia naka tamim-pitiavana nikarakara ny vadiny marary, fa ny an-trano foana misokatra ho zatovolahy iray izay tia an'i Jesosy Kristy.
In Skellefteå I nahazo ara-panahy ny ray sy ny reny izay nanohana ahy sy nivavaka ho ahy.
Bridget sy Martin
Avy eo dia mahazo ny hitondra Bridget sy Martin izay koa nivavaka ho ahy sy nanosotra menaka ahy fa manana ny fiara, eny tsy nisy menaka fahandro hanosotra ahy.
Zava-tsarotra ny Kristianina amin'izao andro izao mba hahitana ny matoky
Ankehitriny dia fantatro fa sarotra ny mahita ny Kristianina mba hatoky sy miara-mivavaka, indrisy. Nahita olona iray izay mihaino sy voaroy no sarotra kokoa ny mahita ankehitriny. Mila mianatra mihaino amin'izy samy izy sy hifampitondra ny enta-mavesatra.
Aho mpanoratra tsy ny tsara indrindra, fa ny soratra avy ny fahalemeko sy ny fanaintainana. Ny Hery sy voninahitra i Jesoa Kristy no Mpamonjy sy fanantenana.
Live toy ny
Te-hiaina tahaka Anna-Maja izay nanao lehibe Fuss, nefa izy nahalala ihany izay nivavaka tanana roa dia afaka manatanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Sven ny fitiavana sy hanokatra ny an-trano dia zavatra tsy maintsy mahatsiaro. Bridget sy Martin dia jiro ho an'i Kristy.